TOAMASINA : Tetidratsy avo lenta no nampisaringotra ireo ankizivavy dimy sy ilay vahiny
Manoloana ny feo miely izay miezaka manaratsy endrika ny tontolom-pitsarana ao Toamasina manoloana ny raharaha rongony mahery vaika na “heroine”, dia misy ny angom-baovao izay nataon’ny mpanao gazety. 19 avril 2022
Nisy ny fanazavana azo manoloana ny fandraisan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina fanapahan-kevitra namotsotra ireo ankizivavy vao erotrerony voasaringotra noho iny raharaha "héroïne" iny. Fanapahan-kevitra namotsotra ireo ankizivavy izay misy niezaka nandroritra amin’ny zavatra hafa mba entina hamotehana ny fahatokisan’ny vahoaka ny Fitsarana.
Fantatra nandritra ny fanadihadiana natao anefa fa tsy tompon’andraikitra ireny dimy mirahavavy navotsotra ireny sy ilay teratany vahiny ary samy tsy nisy nitsindrona na nifoka zava-mahadomelina na mibizina zava-mahadomelina fa olona nofitahina fa hoe “hamonjy fankalazana tsingerintaona”. Io ilay naiditra am-ponja io no voalaza fa nanana paikady sy teti-dratsy maloto amin’ ilay vazaha. Voalaza fa mpisakaiza efa te-hisaraka aminy ilay vazaha, ka isaky ny milaza fa tsy te-hiaraka aminy intsony ity vahiny ity dia rahonany fa hoe : “halefany amina tambajotran-tserasera ny sarin’ izy ireo mamoafady no sady hakany vola be”. Araka ny fantatra dia voalaza fa volabe no efa azony tamin’ izany, hoy hatrany ny fanadihadiana izay voangona. An-kilany dia voalaza fa manana tovolahy iray hafa miaraka aminy izay velominy amin’ny alalan’ny fakam-bola amin’io vazaha io ilay vehivavy iray, ka izy sy ilay tovolahy sakaizany io no mitsindrona sy mifoka “heroine”, tamin’io fotoana nisamboran’ny polisy azy ireo io fa nofitahana hamonjy fety kosa ny dimy mirahavavy hafa sy ilay zavaha. Ity farany izay tena hokendrena izay hampigadra azy.
Mahagaga amin’izao raharaha héroïne ao Toamasina izao koa, araka ny loharanom-baovao marim-pototra, dia nisy olona hafa iray trano tao amin’ilay vehivavy sy sakaizany tamin’ny fotoana nahatrarana azy ireo saingy tsy nosamborin’ny polisy. Raha tsiahivina, dia ny 28 marsa lasa teo tao amin’ny villa iray tao Salazamay Toamasina no nahatrarana ireo héroïne amina grama. Raha ny feo mandeha ao Toamasina, dia ny polisy ao Toamasina mihitsy no voatonontonona ho nisy fihetsika hafahafa hatrany am-boalohany amin’ity raharaha héroïne sarona tao Salazamay ity ary miezaka mampiely feo fa ny fitsarana no ratsy.